Samy mitety lanitra ! | NewsMada
Angidimby mifanaretsaka… Samy maika hilaza ny heviny eny amin’ny vahoaka. Hevitra nomanina tany an-trano fa misy ihany koa hevitra nipoitra teny an-danitra tao anaty angidimby. Resaka vokatry ny tafatafa natao teny ambony teny. Raha ny toerana nitsiriany, tena avo tokoa. Mety ho azo inoana ho resaka avo lenta! Atosaka avy hatrany ho an’ny Malagasy rehefa mby amin’ny tany ireto angidimby.
Mitelin-drora ny sasany maheno ireo kabary tsara lahatra rakofana fandresen-dahatra mipoapoaka. Fa tsy vitsy ihany koa ireo resin-tory na matory am-pitsanganana. Ireto sokajy faharoa ireto no ahatsapana fa hevitra vao niforona teny an-danitra teny ito aroso. Misavoana, misavoana, misavaona hany ka miteraka torimaso ny fandrotsirotsiny… Manomboka eo, samy mitety lanitra na ilay hevitra naloaka ny vava, na ilay nofinofin’ireo mihaino.
Tsy maninona loatra ny mahita ny Malagasy sasany tafiditra ao anaty torimaso lalina miteraka nofy misavoan-danitra vokatry ny fampandriana adrisa ataon’ireo mpanao politika. Fa ny tena olana, hoentin-dry zareo hatrany amin’ilay efitrano kely fandatsaham-bato izay torimaso izay hany ka anjambany ihany ny itondrany ny safidiny.
… Afaka roa na telo taona aty aoriana, izay vao mifoha amin’ny torimasony ireo tao anaty nofinofy lalina. Izay vao mahatsapa fa hevitra misavoan-danitra ihany hay ireo naroso teo aminy, nandritra ny fampielezan-kevitra. Eo vao fantany fa niesona tao anaty torimaso lalina izy ireo…
Raha iverenana ny tantara tany ambadik’Imanareza, anisan’ireo zatra mandinika sy mpamakafaka ny Malagasy, hany ka mahalana dia mahalana izy vao tratry ny nenina. Mifamadika amin’izany anefa ny tranga misy ankehitriny. Mihinana amam-bolony, mora minomino foana, marivo salosana, tsy afa-mandinika, mpanao hevi-dravina, sns.
… Soa ihany fa ny Malagasy sasany fa tsy ny Malagasy rehetra fa raha tsy izany, efa potiky ny fanjanahantany amin’ny endriny vaovao i Madagasikara… Na efa rendriky ny torimaso sy manonofy ny mipetraka eny amin’ny volana avokoa ny Malagasy. «… Koa satria ianareo efa miaina eny amin’ny volana, onenanay i Madagasikara », hoy ny vahiny. Soa ihany fa nofy !